Who were Bengali, so called Rohingya?: VOA နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှ ဒေါက်တာ ၀ါကာအူဒင်အား ဦးသန်းလွင်ထွန်း ကိုယ်စား မေးမြန်းခြင်း။
ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့က ဗီအိုအေသတင်းစာမျက်နှာမှာ ဒေါက်တာဝါကာအူဒင်နဲ့ ဦးသန်းလွင်ထွန်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်..။ အဲဒီဆွေးနွေးခန်းအတွက် ဦးသန်းလွင်ထွန်း က မီဒီယာသမားမပီသစွာ မမေးရဲ၊ မမေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကို ဦးသန်းလွင်ထွန်းကိုယ်စား ကျွန်တော် မေးမြန်းပါ့မယ်..။ ဦးသန်းလွင်ထွန်း ၀ါကာအူဒင်နဲ့ အင်တာဗျူးနေတဲ့ ကိစ္စု၊ မေးမြန်းနေတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ.. ဘင်္ဂလီမဟုတ်တဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အနာဂတ်၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျီုဆက် ဘယ်လောက်ဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာ သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်.။
ဒေါက်တာ ၀ါကာ အူဒင်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖြေဆိုချက်မှာ ရိုင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအစစ် ဖြစ်တာနဲ့ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတိုင်းရင်းသားအစစ်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကို ပြန်လည်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်..။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က RFA နဲ့ မေးမြန်းသွားတဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဒေါက်တာအူဒင်က အာရပ်တွေသင်္ဘောပျက်ပြီး ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်..။ မေးရင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲဖြေမှာပါပဲ…။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းက ရိုဟင်ဂျာ(ဘင်္ဂလီ)တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းသုံးထောင်လောက်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာတွေရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်..။
အဲဒီတော့ ဦးသန်းလွင်ထွန်းထပ်ပြီးမေးသင့်တာက…..။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အတူတကွရှိလာတယ်ဆိုတဲ့ အဲဒီ တိုင်းရင်းသားလို့ အမည်ခံသူတွေက .. ဘာကြောင့် .. ရခိုင်စာ/ရခိုင်စကား ..လုံးဝမတတ်ပဲ.. ရခိုင်လို မပြောခဲ့ကြတာပါသလဲ..။ ယနေ့အထိ ရခိုင်နဲ့ ရုပ်ရည် လုံးဝ မတူခဲ့ကြတာပါသလဲ..။ နောက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ပွထ နေတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေကြားထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသား ဆိုတတဲ့ နာမည်(အမည်/မှတ်တမ်း) တစ်ခုတစ်လေဘာ့ကြောင့် မပါကြပါသလဲ..။ အဲဒီမေးခွန်းတွေပါ..။
မလေးက အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာသာရေးနဲ့ရောထွေးနေထိုင်လို့ရပေမယ့်.. .အခု ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပြဿနာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အရင်ကတည်းက VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာလည်း ကြာခဲ့ဖူးပါတယ်..။ အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်ကိစ္စတွေ နားထောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ ထိုင်းလို လွတ်လပ်တဲ့မူဝါဒတွေကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတောင် တောင်ပိုင်းက အစ္စလာမ်တွေခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားလို့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လို့ ထိုင်းစစ်တပ်က နှိမ်နင်းတာတွေ၊ နောက်ပိုင်း ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲဝင်ပြီး သံဃာတော်တွေကို သတ်တဲ့အတွက် ထိုင်းအထူးတပ်ဖွဲ့တွေက ခေါင်းတုံးတုံး သင်္ကန်းစည်းပြီး လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ခဲ့တာတွေက ထိုင်းတပ်မတော်က ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အထင်ကရဖြစ်ရပ်တွေပါ။ အခုထက်ထိလည်း အဲဒီပြဿနာကို ထိုင်းက မငြိမ်းသတ်နိုင်သေးပါဘူး..။ အဲဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ(ဘင်္ဂလီ) လှေတွေ ထိုင်းကို လာရောက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းရင် ထိုင်းက အခြေချမခံပဲ လှေပ်ါတင် ပြန်မျှောပစ်တာ သက်သေပါပဲ..။ ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ ဒုက္ခပေးနေတဲ့ အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေခိုင်မာနေတဲ့အတွက် ဒီလိုလုပ်ပစ်တာပါ..။ အဲဒါတွေကို ဦးသန်းလွင်ထွန်းတို့ သိရဲ့သားနဲ့ ဘာ့ကြောင့် အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို ထောက်ပြပြီး မမေးခဲ့တာပါလဲ ခင်ဗျား..။
ဘာသာတရားက နောက်တယောက်က ဘာသာတခုက နောက်တခုကို ဘယ်တော့မှ harm မပြုပါဘူး။ ဘာသာတရားဆိုတာ spiritual - ဒါကို စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု - ကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာ ယဉ်ကျေးမှု က ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ရှိပေမယ့် အဲဒီ ယဉ်ကျေးမှုက မြန်မာယဉ်ကျေးမှု၊ ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုကို ဘယ်လို ထိခိုက်ပါ့မလဲ။ ထိခိုက်လို့ မရပါဘူး။
ဆိုတဲ့ ၀ါကာအူဒင်ရဲ့စကားကို ပြန်လည်ထောက်ပြလို့ရတဲ့ အချက်တွေ၊ မေးခွန်းတွေ၊ ဥပမာတွေဖြစ်ပါတယ်..။
ရိုဟင်ဂျာတွေက ဘင်္ဂလားနဲ့ မတူဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့သိသလောက် ကိုးကွယ်မှု/၀တ်စားဆင်ရင်ပုံ/ထုံးတမ်းစဉ်လာ/ဘာသာစကား .. သိပ်မကွာပါဘူး..။
ဘင်္ဂလားနဲ့မတူဘူးဆိုရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ရခိုင်နဲ့ကကော ဘာ့ကြောင့် လုံးဝ မတူတာလဲခင်ဗျား..။ ဘာသာရေး/သမိုင်းကြောင်း/ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ/ဘာသာစကား.. ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး..။ အဲဒီလို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအတူနေပြီး ရခိုင်နဲ့ လုံးဝမတူတာကိုကော ဘာ့ကြောင့် မမေးမြန်းတာလဲခင်ဗျား..။ အဲဒီလို ကိုယ့်နိုင်ငံက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးဖို့ .. ဦးသန်းလွင်ထွန်း ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်..။ ကိုယ့် မြန်မာတိုင်းရင်းသား (အထူးသဖြင့်) ရခိုင်တွေရဲ့ မျက်နှာကို မထောက်ပဲ ချန်လှပ်ထားခဲတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်..။
၁၉၅၀ စက်တင်ဘာလထုတ် ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာမှာ ဘင်္ဂါလီနွယ်ဖွားတွေအတွက် ကမ္ဘာသိအောင် မွေးစားပေးခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးပြုပြီး အဲဒီမျိုးနွယ်တွေအတွက် နေရာတစ်နေရာ.. တိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့တောင်းဆိုတာကို ဒေါက်တာဝါကာအူဒင်က အမေရိကန်အစိုးရ ဆီမှာ human rights violations လုပ်ခံရတယ်လိုပ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြိုးစားနေတာကို Voa ကလည်း အင်တာဗျူးပေးခဲ့တာ.. တော်တော် အံ့သြမိပါတယ်..။ ဦးသန်းလွင်ထွန်းနေရာမှာ ကျွန်တော် မြန်မာစကားပြောတတ်တဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ်မေးခဲ့တာတွေကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး.. တော်တော် ရှက်မိမှာ အမှန်ပါပဲ..။ ..ဒီမေးခွန်းတွေဟာ ငါ့နိုင်ငံနဲ့ ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်. အကျိုးရှိမရှိ သုံးသပ်မိမှာပါပဲ..။
နောက်ဆုံး ဒေါက်တာဝါကာအူဒင်ကို မှာကြားလိုတာက ရိုဟင်ဂျာ(ဘင်္ဂလီ) အနေနဲ့ အဲဒီလို human rights violations လုပ်ခံရတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင် ..ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း ဘူးသီးတောင်မောင်တော၊ စစ်တွေနဲ့ ရခိုင်ဒေသ အများစုက တစတစ လျော့ပါးလာတဲ့ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတွေအတွက် လူမှုရေး/စီးပွားရေ့း တစတစ၀ါးမျိုလာတဲ့ သမိုင်းမရှိတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကြောင့် human rights violations အလုပ်ခံနေရပါတယ်ဆိုပြီး ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်များ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများရဲ့ ဆန္ဒထောက်ခံပွဲများ..။ ရိုဟင်ဂျာ (ဘင်္ဂလီ) ဆိုသူတွေပတ်သက်ခဲ့တဲ့ သက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားများနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ အခြားဒေသတွေက အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ဥပမာများ၊ လူဦးရေပေါက်ပွားမှုစာရင်းများ ကို စုစည်းပြီး ဟီလာရီနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရထံကို တင်ပြဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်း သိစေအပ်ပါတယ်..။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 12:11 AM